छिनमै बिर्सने समस्या छ ? यी कुरामा ध्यान दिनुहोस् « Mero LifeStyle
छिनमै बिर्सने समस्या छ ? यी कुरामा ध्यान दिनुहोस्
वृद्ध अवस्थामा दखिने समस्या मध्ये एक हो, बिर्सने बानी । यो समस्या धेरैलाई सामान्य लाग्न सक्छ । उमेर बढ्दै जाँदा बिर्सने बानी बढ्दै गएको छ भने त्यसको पछाडी केही काराणहरु पनि हुन सक्छन् । बिर्सने समस्याका कारणहरु के के हुन् ? र, यसबाट कसरी बच्न सकिन्छ ? भन्ने विषयमा मनोविद् डा. नरेन्द्रसिंह ठगुन्नाको सुझाव यस्तो छ ः